Qaar ka mid ah istuudiyaha animation-ka ah oo runtii mudan in la ogaado | Abuurista khadka tooska ah
Ma aha wax cusub in maanta Naqshadeynta Mooshinka Tani waa dalab aad u ballaaran oo ay qabaan shaqaalihii horeyba uga shaqeynayay xayeysiinta, qaabeynta qaabdhismeedka, iyo farshaxanka, iyo sidoo kale ardayda isla aagagga ah.
Si kastaba ha noqotee, maxaad u isticmaali kartaa sidii tixraac inta lagu jiro xilligaas waxyi? Su'aashan had iyo jeer la isweydiiyo awgood, qoraalkan waxaan uga hadli doonaa shan istuudiyo animation.
1 La kulan 5 istuudiyo animation cajiib ah
1.1 Giir qudhaanjo
1.3 Istuudiyaha Cub
La kulan 5 istuudiyo animation cajiib ah
Marka xigta, waxaan kuu sheegi doonnaa illaa shan istuudiyaha animation inaad shaki la’aan ogaato
2017-kan, Giant Ant ayaa dhammaystiray toban sano oo waayo-aragnimo ah tiro balaadhan oo ah mashaariic cajiib ah gudaha aagga "Motion design".
Haddii wax laga sheego shaqada daraasaddan, waa noocyada kala duwan ee mashruuc kasta oo ay fulinayaan, tan iyo waxay maareeyaan inay isku daraan aqoonsiga macmiil kasta iyada oo la taabanayo astaamaha xirfadlaha ee mashruuca u fuliya qaab layaableh.
Sidoo kale, habka ay sida caadiga ah ugu wada xiriiraan shabakadooda bulsheed, waxay soo jeedinayaan inay jirto a dareen aad u yaqaan gudaha daraasaddan, sida inay ka mid yihiin asxaabta had iyo jeer is taageera.
Qaar ka mid ah macaamiisha weyn ee Art waa: madal jilicsan, TNT, Costa del Mar, Asana, Google, Mailchimp, Caafimaadka Ragga, iwm.
Xarunteeduna tahay New York, Los Angeles, iyo mid kale oo ku yaal Sydney, istuudiyahaan wuxuu ka kooban yahay koox fanaaniin ah, nashqadeeyayaal iyo sheeko-yaqaanno. Buck sidoo kale wuxuu u taagan yahay noocyada kala duwan ee mashaariicdiisa, si kastaba ha noqotee, waxa ugu soo jiita isaga kaliya maahan halabuurkiisa, laakiin sidoo kale jadwalkiisa animation.
Si la mid ah shaqadaada, taada sanduuqyada macaamiisha Waa wax cajiib ah, maaddaama ay ku jiraan Nike, Google, Instagram, Facebook iyo IBM.
Waa daraasad ka dhalatay midow laba shay oo muhiim ah oo naqshadeynta ah, Bem Skinner iyo Fraser Davidson.
Davidson ayaa xirtay in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah gudaha warshadaha animation-ka wuxuuna ku guuleystey inuu ku guuleysto abaalmarino badan animations-ka awgiis. Intaa waxaa dheer, wuxuu ka soo shaqeeyay dhowr ka mid ah noocyada ugu muhiimsan adduunka.
Skinner, dhiniciisa, sidoo kale in kabadan toban sano oo khibrad ah, wuxuu diirada saaray inbadan SEO, UX, suuq geynta internetka iyo Waxqabadka, meelaha laxiriira qaabeynta.
Kuwa yaqaan Davidson ayaa ogaanaya taas waxaa jira saameyn weyn isaga mid kasta oo ka mid ah mashaariicda ay fulisay Cub, maahan oo kaliya sharraxaaddeeda laakiin sidoo kale qaabka animations-ka. Si kastaba ha noqotee, kooxda oo dhan waxay leeyihiin madax-bannaani markay shaqadooda qabanayaan, tani waa mid ka mid ah sababaha ka dhigaya Studio-ka Cub mid aad u weyn.
Macaamiisha ay daraasaddan yeelatay waxaa ka mid ah shirkadaha ka socda qaybta isboortiga, sida NFL, Fox Sports, ESPN, Strava, iyo sidoo kale macaamiisha ka baxsan waaxdan sida Dropbox, Prizeo, Facebook, Expedia, iwm.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Qaar ka mid ah istuudiyaha animation-ka ee runtii mudan in la ogaado